Kubhururuka kweNhunzi Inonzi Fruit Fly | Zvakangoitika Zvega Here?
Zvakangoitika Zvega Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Kubhururuka kweNhunzi Inonzi Fruit Fly
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kubhururuka kweNhunzi Inonzi Fruit Fly
Kana wakamboedza kurova nhunzi unoziva kuoma kwazvakaita. Ikaona kuti iri kuda kubatwa inokurumidza kutiza.
Nyanzvi dzesainzi dzakaona kuti nhunzi inonzi fruit fly, inokwanisa kupidiguka-pidiguka sezvinoita ndege diki dzehondo dzinonzi mafighter jets, uye inokwanisa kuzviita munguva iri pasi pesekondi. Purofesa Michael Dickinson anoti, “nhunzi iyi inozvarwa ichitogona kunzvenga-nzvenga. Zvainoita zvakafanana nekutora kasvava wokaisa mundege diki yehondo kobva katotanga kuityaira.”
Vaongorori vakaona kuti inorova mapapiro ayo ka200 pasekondi yega yega. Ikangorova mapapiro kamwe chete inotokwanisa kupidiguka yobva yatiza.
Vaongorori vakaonawo kuti kukurumidza kuchinja kunoita nhunzi iyi kwayanga ichienda kunodarika zvakapetwa ka50 kubwaira kunoita munhu ziso rake. Purofesa Dickinson anoti, “Munguva pfupi, nhunzi iyi inokwanisa kuona kuti ndekupi kune njodzi uye kuti yotizira kupi.”
Vaongorori vari kuedza kutsvaga kuti kanhunzi kane pfungwa diki zvakadaro kanogona sei kuita zvinoshamisa kudaro?
Nhunzi inonzi fruit fly inochinja-chinja kwainenge ichienda. Inotiza njodzi nekupidiguka ichichinja kwayanga ichienda munguva iri pasi pesekondi
Unofungei? Zvakangoitikawo zvega here kuti nhunzi iyi iite zvainoita pakubhururuka kana kuti pane akaisika?
Zvakangoitika Zvega Here? Sainzi neBhaibheri
Chii Chinoita Kuti Mhashu Dzisabonderana?